राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडीहरुको फाइल फोटो
कात्तिक १४, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका चार जना खेलाडी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले बिहीवारदेखि प्रशिक्षणमा बोलाइएका ३४ जना खेलाडीमध्ये चार जना कोरोनाबाट संक्रमित भएको बताएको छ ।
कोरोना देखिएका चारै जना खेलाडी सेल्फ आईसोलेशनमा बसेका छन् । नेपालले बङ्गलादेशसितको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बिहीबारदेखि प्रशिक्षण शुरु गरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा शुरु भएको प्रशिक्षणमा ३० खेलाडी उपस्थित भएका थिए ।
नेपालले बङ्गलादेशसित ढाकास्थित बङ्गबन्धु रङ्गशालामा पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल यही कात्तिक २८ गते तथा दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आगामी मङ्सिर २ गते खेल्ने तय भएको एन्फाले बताएको छ ।
एन्फाले खेलाडीलाई त्रिपुरेश्वरस्थित वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा राखेको छ । प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले एन्फालाई अनुमति दिएको हो । नेपालले बाल गोपाल महर्जनको नेतृत्वमा तयारी शुरु गरेको छ ।
मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिन स्विडेनमा रहेकाले एन्फाले महर्जनलाई टिम हेर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । टोलीको सहायक प्रशिक्षकमा किरण श्रेष्ठ र गोलकिपर प्रशिक्षकमा विकास मल्ल रहेका छन् ।
फिफा विश्वकप छनोटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो । रासस
दुई वर्षपछि विराट गोल्डकप आयोजना हुँदै, चैत २६ गतेदेखि १० ओटा टिम मैदानमा उत्रने[२०७७ चैत, ६]
नेपाल सुपर लिग फुटबल प्रतियोगिता वैशाखको दोस्रो सातादेखि [२०७७ फागुन, १०]
चेन्नईमा हुने आईपीएलका लागि नेपालका ८ जना खेलाडी सिफारिस [२०७७ माघ, २४]
नेपालमा पहिलो पटक गहतराज सञ्जाल कप हुँदै, कति छ प्रथम पुरस्कार ?[२०७७ माघ, १८]
पोखरा अन्तरराष्ट्रिय म्याराथनको १५औं संस्करण फागुन १ गते[२०७७ पौष, २८]
युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य १०% ले बढ्यो, प्रतिकित्ता मूल्य रू. २०९ पुग्यो